DHAGAYSO:- Axmed Madoobe oo beeniyay in uu isaga lugaha ku dhagan Dowladda Somalia “Waa nagala been abuurtay”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DHAGAYSO:- Axmed Madoobe oo beeniyay in uu isaga lugaha ku dhagan Dowladda Somalia “Waa nagala been abuurtay”.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maalmahan ku sugan Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diidey inay wada-hadlaan.
Waxaa uu sheegay in dad badan aaminsan yihiin inay iyaga dowladda curyaaminayaan,hayeeshee isaga uu dalbadey wada-hadal balse uu waayay dad uu la hadlo.
“Runtii dadka waxaa ay inaga aamineyn inaan dowladda lugaha aan heysano,waxaa ii yimid Guddoomiyaha Aqalka Sare,waxana ku ari Farmaajo ila hadashii laakin jawaabtii uu i siiyey ayaa waxaa ay aheyd in uusan heyn cid uu ila hadashiiyo ayuu yiri”Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn sheegay in Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dhibaatooyin kala duwan ku heyso dowlad goboleedyada sigaar ah Maamulka Jubbaland.
Previous articleQaabkee udhacaysaa Doorashada Madaxtinimada Galmudug?.
Next articleJubbaland:- Alshabaab oo laga xureeay deegaano ay sanooyin badan maamulayeen.
Ahmadey January 20, 2020 At 1:11 pm
Ahmed madoobe waa garma qaate aan caqli badneyn,inuu qaladkiisa runta ka sheegana wuxuu ka doorbiday inuu cid kale eeda saaro,qabyaaladna la warwareego.
tan maanta jubbaland ka taagani ma quseyso arrimaha uu boosaaso kaga hadlayey ee ku saabsan khilaaf jubbaland iyo puntland kala dhaxeeya federaalka ee waa inuusan aheyn n8n si sharci ah lagu doortay waa inuusan haysan sharciyad uu madaxweyne jubbaland ku sheegto,ma suurogal baa in dadka iyo dawladda puntland.ku qanacsan yihiin wixii(doorashadii kismaayo) kismaayo ka dhacay,miyey qaadan karaan in Ahmed madoobe oo ay ogyihiin siduu isu doortay inay u sacabo tumaan oo inuu saxan yahay looga dhigo-
Ahmed madoobe 8 sano jubbalandta uu xukumay waxay aheyd kismaayo oo keliya,haddana meeluma sii dhaafi karo,taasi awgeed yuusan dadka waqtiga ka lumin iskuna leyn.
Taajka Maakhir January 20, 2020 At 5:40 pm
Jaalle dhowr arrimood baa iskaga kaa dhex yaacay oo in aad kala shaandheyso ay fiicnaan lahayd. Midda keli ah ee aad ku saxsan tahay waxaa weeye in uu Axmed Madoobe farsamada hoggaamineed aad ugu hungoobay in kasta oo ay duruufuhu ka kallifeen.
Qodobbada kale ee lagu eedeeyo se waa waxba kama jiraan. Eedda aad ku wiiqday ee qabyaadaleynta ahi waa mid qalad ah waayo Jubbaland iyo gaar ahaan Kismaanyo waxa weerarka qabyaaladeed ku haya waa Habar Gidir oo magaca Hawiye ku mooryaaneynaysa. Dalkani loollan qabali ah oo straatiji ah ayaa weli ka jira oo Axmed Madoobe meel fog ayuu wax ka eegayaa. Aad ayuu na ugu guuleystay dagaalkaas qaboow ee tolweynahiisa Daarood la damacsan yahay in awoodda Jubbaland looga la wareego.
Axmed Madoobe rag Ogaadeen ah ayuu xataa ku halleyn kari la’yahay hoggaanka Jubbaland haddii qabyaalad lagu xaman lahaa. Waa kuwa isaga oogu sokeeya. Shaxdu intaas ka weyn oo Majeerteen iyo Mareexaan baa la garan waayay.
Waxaa sha’niga Daaroodka Jubbaland dhaawacaya Majeerteenka iyo Mareexaanka oo xukun jaceyl iimaanka lagaga qaaday. Labadan baa tolweynahan isku jabinaya oo aan lahayn aragti dheer oo straatiji ah sida Ogaadeenka. Dalkan waxaa gudaha ka curyaaminaya oo dagaal qaboow qowmiyadda Daarood ku la jira Isaaqa iyo Habar Gidirta ay qabyaaladdu ku noqotay xanuun dhimireed.
Majeerteen Puntland bay baylihiyeen oo beelahii la dhashay ka wada didiyeen inta ay kursi xun dhexdooda isku ximinayeen. Ma sha’niga Daarood baa lagu halleyn karaa bay idin la tahay? Mareexaan na waa kuwaas is colaadiinta dhexdooda ka taagan aawadeeda deegaankooda ballaadhan maamul uga dhisan kari waayay oo mar ba maamullo ay Habar Gidir isku haysato lagu hoos moosayaa. Yaa talada Daarood ku halleyn kara?
Runta iyo xaqa ka xiga jaalleyaal.
Ahmed January 20, 2020 At 7:23 pm
Axmed Madoobe waa geesi banaankaas degey. Ka wareersan ee Xaarmaajo lq yidhaahdo ee si bilaa indho ah u dhuq dhuq leh, qori dheer oo caaro fiiqan ayuu iskaga qabtay. Geesigaas halkaas kaga hay ayaan anigu leeyahay.